चर्चीत अभिनेत्रीहरु जसले आफ्नो नाकको प्लाष्टिक सर्जरी गरे !
चर्चामा आउन पनि उनीहरु कहिले ओठको त कहिले स्तनको प्लाष्टिक सर्जरी गर्ने गरेका छन् । सुन्दरतालाई झन् परिस्कृत बनाउन उनीहरुले यस्तो कदम लिएको अभिनेत्रीहरु बताउँछन् । कतिले सर्जरी गरेको स्वीकार गरेका छन् भने कति ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
आउनुहोस् हेरौ केही यस्ता चर्चीत अभिनेत्रीहरु जसले आफ्नो नाकको प्लाष्टिक सर्जरी गरे ।
मिस वल्र्ड बन्नुपुर्व उनले नाकको प्लाष्टिक सर्जरी गरेकी थिइन् । यसले उनलाई फाइदा नै भयो । उनले नाकको प्लाष्टिक सर्जरी गरेकी थिइन् । आजको उनको सुन्दरता बलिउडमा मात्र नभई हलिउडमा समेत हुने गरेको छ ।
२. ऐश्वर्या राय बच्चन
सन् १९९४ की मिस वल्र्ड ऐश्वर्याको सुन्दरताको जति प्रशंसा गरे पनि कमै लाग्छ । बच्चन परिवारकी बुहारी समेत रहेकी यी अभिनेत्रीले धेरै पटक प्लाष्टिक सर्जरी गरेकी छिन् । उनको नाकको सर्जरीले भने ठुलै चर्चा पाएको थियो ।
३. करीना कपुर खान
बलिउडकी यी हट अभिनेत्री पछिल्लो समय आइटम डान्सका लागि परिचीत छिन् । आफ्नो सुन्दरता बढाउन उनले सर्जरीको सहायता लिइन् । उनले तस्बिरलाई नियालेर हेर्ने भने उनको नाकमा भएको परिवर्तन प्रष्ट देखिन सकिन्छ । करिना कपुरले नाकको प्लाष्टिक सर्जरी गरेर सही काम गरेको बताउँछिन् । उनी झन् सुन्दर देखिएकी छिन् ।
४. शिल्पा सेट्टी
शिल्पा सेट्टी पछिल्ला दिनहरुमा फेरिएको स्वरुपमा देख्न सक्छौ । उनले आफ्नो रंगलाई लिएर पनि प्लाष्टिक सर्जरी गराएकी छिन् । सुन्दरता बढाउन उनले धेरै पटक सर्जरीको सहायता लिएकी थिइन् । उनले आफ्नो करिअरमा दुईपटक नाकको प्लाष्टिक सर्जरी गरेकी थिइन् ।
५. श्रुति हसन
दक्षिण फिल्ममा राम्रो करिअर बनाएकी यी अभिनेत्रीले पनि नाकको प्लाष्टिक सर्जरी गरेकी हुन् । श्रुतिलाई आफ्नो नाकदेखि समस्या थियो । उनी सर्जरी गरेर भएपनि नाकको स्वरुप बदल्न चाहान्थिइन् । नभन्दै उनले नाकको सर्जरी गरिन् । उनी सर्जरी पछि झनै राम्री देखिएकी छिन् ।